Entan’ny orinasa Imex, MBA sy MBT: “Tsy mitovy ny fanambarana voaray sy ny hita maso”, hoy ny ladoany | NewsMada
Entan’ny orinasa Imex, MBA sy MBT: “Tsy mitovy ny fanambarana voaray sy ny hita maso”, hoy ny ladoany
Resabe tato ho ato ny momba ireo entana iombonan’ny orinasa Imex, MBA sy MBT, hoe tsy avoakan’ny ladoany ao amin‘ny Mad*, trano fitahirizan’entana nahazoan-dalana, eny Tanjombato.
Manamafy ny fadintseranana ny amin’ny andraikiny ho fampidiram-bola ho an’ny fanjakana. Tsy zava-baovao ny fanaon’ny mpandraharaha sasany mpanafatra, na mpanondrana entana amin’ny filazana diso ataony mba tsy handoavam-bola, araka ny tokony ho izy, na hitadiavan-dalana amin’ny kolikoly. Tsy maintsy hanaovana fanambarana mazava sy marina ny entana rehetra nafarana, araka ny lalàna apetraky ny ladoany.
Andrasana io fanambarana ataon’ny mpandraharaha io, ary rehefa hita sy voamarina sy voaloa ara-dalàna ny haba vao afaka mivoaka ao amin’ny seranana, na toeram-pitahirizan’entana, toy ny Mad, ny entam-barotra.
Ny 11 septambra 2018, nidina teny Tanjombato, misy ny entan’ireo orinasa ireo ao anatin’ny kontenera 12 ny sampandraharaha miady amin’ny hosoka ao amin‘ny fadintseranana. Nataon’io sampandraharaha io ny fanisana ireo entana teo imason’ny tompony. Taorian’izay, vao nisy fanambarana voalohany, ny 12 oktobra voarain’ny fadintseranana ary ny faharoa, ny 18 oktobra. Rehefa nampitahan’ny ladoany ireo fanambarana ireo, hita fa misy tsy fitoviana mibaribary ny fanambarana natao sy ny hita teny an-toerana.
Tsy tonga ireo nantsoina
Manoloana izany, niantso ny tompon’ireo orinasa ny sampana nanao fitiliana ao amin’ny fadintseranana, saingy tsy tonga ireo nantsoina, nilaza fa « tsy eto an-toerana », na « tsy salama ». Ny 3 oktobra teo, nisy nanely ihany ny antso voakasika amin‘ity raharaha ity. Ny tolokandro, tokony ho nitohy ny fihainoana azy ireo, miaraka amin’ireo mpisolovava azy, nefa tsy niverina intsony izy ireo. Antony, nilaza ny mpisolovava fa nisy niakatra tosidra ny iray. Noho izany, hahemotra ny 9 novambra ny raharaha.
Tonga hatrany amin’ny fandrahonana
Raha ny fahitan’ny fadintseranana azy, manao izay fomba rehetra ireo voakasika amin‘ity raharaha ity hialana amin’ny ara-dalàna, tonga hatrany amin’ny fandrahonana mpiasa sy ny tale jeneraly.
Ho an’ny ladoany, arahi-maso akaiky ireo entana ireo, nefa tsapa, raha ny fanamarinana nataon’ny fadintseranana ihany, fa tsy maika amin’izany ny tompony, ary mampiseho fihetsika tsy mila hanaovana fanaraha-maso. « Na izany aza, tazonina ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana, araka ny lalàna, ary mitovy daholo ny rehetra eo anatrehan’izany », hoy ny ao amin’ny fadintseranana.